रोचक / विचित्र – Page 174 – Medianp
हैट यो कस्तो ट्वाइलेट हो ? हाँसो रोक्न नसकिने तस्विरहरु !
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ १०, २०७५१७:०१0
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ १०, २०७५१६:२०0
अस्ट्रियाको एक स्कुल जहाँ व्यवहारीक रुपमा सेक्स गर्न सिकाइन्छ
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ १०, २०७५१३:३१0
एजेन्सी । सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने कुरा अपत्यारीलो जस्तो लाग्छ तर सत्य हुन्छ । अस्ट्रियाको राजधानी भियना नजिकै रहेको स्कुलको नाम नै ‘भियना सेक्स स्कुल’ रहेको छ । जहाँ विद्यार्थीलाई व्यवहारीक रुपमै सेक्स गर्न सिकाइन्छ
मुड खराब छ ? हेर्नुहोस् यी हाँसोलाग्दा तस्विर
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ १०, २०७५१२:१८0
कुनै तस्विर यस्ता हुन्छन, जो हेर्दै हाँसो लाग्छन् । चाहे तपाईको ती तस्विरसँग कुनै सम्बन्ध नहोस्, तर तपाईलाई ती तस्विरले मनोरञ्जन दिलाउँछन् । बेला सामाजिक सञ्जालमा यस्ता तस्विर भाइरल हुन्छन् । आज हामी यस्तै केही तस्विर
चीनको एउटा स्कुल जहाँ लव र डेटिङबारे मात्रै बढाइन्छ
Media NPप्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ १०, २०७५०९:१२0
एजेन्सी, १० जेठ । लव र डेटिङबारे पनि पढाई हुन्छ भन्ने सुन्दा तपाईलाई अनौठो लाग्न सक्छ । तर, हाम्रै छिमेकी मुलुक चीनमा यसकै विषयमा पढाइ हुने विद्यालय सञ्चालनमा छन् । चीनको बेइजिङमा एउटा यस्तो स्कुल ‘लव
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ०९, २०७५१७:११0
एजेन्सी, झट्ट हेर्दा अनौठा र अपत्यारिला यी स्विडिस कलाकार एरिक जोनसनले सम्पादन गरेर तयार परेका हुन् । निकै आकर्षक लाग्ने यी तस्बिर सामान्य मानिसको सोच्नेभन्दा निकै फरक तरिकाले सम्पादन गरिएको छ । जोनसनले कागजका टुक्राको प्रयोगबाट खिचिएको तस्बिरलाई फोटोशपको माध्यमबाट तस्बिरलाई जीवन्त बनाएका हुन् । उक्त तस्बिरहरु बनाउनका लागि झन्डै एक
एक तस्वीर, हेर्दा अश्लिल तर हृदयविदारक
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ०९, २०७५१५:२०0
एजेन्सी । एउटा यस्तो तस्विर जसलाई बुझ्न संसारलाई धेरै समय लाग्यो । विश्लेषकहरु पनि यति दोधारमा परे कि जबसम्म चित्रकार स्वयंले यो तस्विर पछाडिको रहस्य खोलेनन् । कारण तँपाईं हामी सजिलै देख्छौं कि यो तस्विरको
७० वर्षिय महिला गर्भवती, डाक्टरसमेत चकित
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ०९, २०७५१५:०३0
एजेन्सी । मेक्सिकोमा ७० वर्षिय एक वृद्ध गर्भवती भएकी छन् । मारिया डि ला लुजले आफ्नो पेटमा ६ महिनाको छोरी रहेको दाबी सही ठहरीय उनी सन्तान जन्माउने संसारको वृद्ध महिला हुने बताइएको छ । आफुलाई
हैन कसरी निस्कन्छन् यस्ता बकलोल जुक्ती ? हाँसो रोक्न नसकिने तस्विरहरु !
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ०९, २०७५१३:३३0
केहि रमाइला तस्विरहरु, जुन निकै हाँसो लाग्दा छन्
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, जेठ ०८, २०७५१८:५०0